Ver RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ(၂၀၂၁ ဧပွီ ၂၄ ရကျ မနကျပိုငျး) - Series y Programas
Ver RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ(၂၀၂၁ ဧပွီ ၂၄ ရကျ မနကျပိုငျး)
▷RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ(၂၀၂၁ ဧပွီ ၂၄ ရကျ မနကျပိုငျး)
– မွနျမာ့အရေးအာဆီယံမှာ ဆှေးနှေးမယျ့အပျေါ ဒေါကျတာဆာဆာနဲ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြ၊
– မွနျမာ့အရေးဖွရှေငျးမှုနဲ့ အာဆီယံအတှကျ စိမျချေါခကျြမြား၊
– အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရအပျေါအပွညျပွညျဆိုငျရာ အမွငျမြား
– ပညာရေးဝနျထမျးတှေ စဈကောငျစီကို ဆကျလကျဖီဆနျမညျ
– မှနျတိုငျးရငျးသား အစီအစဉျ
RFA နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်(၂၀၂၁ ဧပြီ ၂၄ ရက် မနက်ပိုင်း)
– မြန်မာ့အရေးအာဆီယံမှာ ဆွေးနွေးမယ့်အပေါ် ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်၊
– မြန်မာ့အရေးဖြေရှင်းမှုနဲ့ အာဆီယံအတွက် စိမ်ခေါ်ချက်များ၊
– အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမြင်များ
– ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ စစ်ကောင်စီကို ဆက်လက်ဖီဆန်မည်
– မွန်တိုင်းရင်းသား အစီအစဉ်
RFA မွနျမာဌာနဝကျဘျဆိုကျ: http://www.rfa.org/burmese/
RFA မွနျမာဌာနသတငျးလှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter
RFA မွနျမာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php
တယျလီဖုနျးအတှကျ RFA Burmese Mobile App
CANTIDAD DE VISITAS QUE TUVO EL VIDEO : 238153 PERSONAS LO VIERON
DURACION DEL VIDEO 30:5 🎥
FECHA EN LA QUE SE SUBIO EL VIDEO 2021-04-24 01:02:44 📅
CUANTOS ME GUSTA OBTUVO 5829 👍
Ma Lay dice:
No Nl dice:
Nay Mayo aung dice:
Mon people do you want to be Burmese do u want to United with Burmese?
NUG we don’t need We need every state. They rule their self
Sai Tun dice:
Kyaw win Oo dice:
Ah Thang Lek dice:
มะขาม มะขาม dice:
จอมใจ หมื่นนรา dice:
nyeinchan aung dice:
Asian မပါလည်း မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရှိတယ် ဖိုက်တင်း ဆော်မယ်
Martin Myintaye dice:
Fight to End. We love CRPH and နှဉေီးတျောလှနျရေး မွနျမာ့အတှေး
HTARHTAR NWE dice:
Dr Sar Sar ပြော ဒါ တွေ အ ရမ်း မှန် တယ်. You speech very good right true ..https://youtu.be/mS7wYx4FEuo
Fuck you ASREAN i don't want to negotiate or engagement with military muder min aung hlaing …..At least 739 people have been killed so far as Myanmar’s military continues to use brutal methods to quell anti-coup protests,alocal monitoring group said late on Wednesday.
" မြန် မာ နိုင် ငံ ရေး အ ကျပ် အ တည်း နဲ့ အာ ဆီ ယံ ရဲ့ အ ခန်း က ဏဌာ…https://youtu.be/LrDslbFB3FQ
ပြော ဆို ဆွေး နွေး သွား တာ အ ရမ်း ကောင်း လိုက် တာ အ ရမ်း မှန် လိုက် တာ. ၁၀၀% မှာ ၇၅ % လောက် ကောင်း တယ်… https://youtu.be/LrDslbFB3FQ
ရှမ်း မြောက် အ ဖွဲ့. မ ဘ သ အ ဖွဲ့. စွမ်း အား ရှင် အ ဖွဲ့. ဘိန်း အ ဖွဲ့. သူ ခိုး အ ဖွဲ့. လူ မှောင်း ခိုး ကူး တဲ့ အ ဖွဲ့ ကွန် မြူ နစ် စစ် အာ ဏာ ရှင် အ ဖွဲ့. တွေ က. ဖြိုး. ခွဲ နိုင် ရင်. ရ ပြီ
ကု လ သ မမဂ အဖွဲ့ အ များ စု က ရု ရှ တ ရုတ် ကွန် မြူ နစ် ဘိန်း ရာ ဇာ သူ ခိုး လူ မှောင် ခိုး ကူး တဲ့ အ ဖွဲ့ သွေး စုတ် ဖုတ် ကောင်း. အာ ဏာ ရူး အုပ် စု တွေ ကို ကာ ကွယ် ပေး နေ တယ်. ဘာ တစ် ခု နှာ အောင် မြင် တာ မ တွေ့ သ လို့. တိုင်း ပြည် တွေ က အာ ဏာ ရှင် လက် အောက် ထဲ ကို ဘဲ ကျ ရောက် သွား တယ်. ဥပမာ. ဆီရီယား ဗီနီဆွဲလား ဟောင် ကောင် ယီ မင်. ………..
Broken Arrow M2k dice:
အကယျ၍ဒေါငျတာဆာဆာသာဒျေါလာမရရငျ ပွညျသူအတှကျရပျတညျနိုငျပါ့မလား စိတျရငျအမှနျနဲ့
ရိုဟငျဂြာလို မရှိတဲ့ ဘဂျါလီလူမြိုးကို ဘာလို့
ရိုဟငျဂြာလို့သုံးရတာလညျး ဒျေါလာတဈမကျြနှာတညျးမကွညျဘဲနဲ့ မွနျမာပွညျသူပွညျသားတှအေတှကျ စိတျအရငျနဲ့လုပျပေးပါ
Aung Htay dice:
စဈရူးအစိုရ အွမနျကဆြုံးပါစေ အရေးတျောပုံ မုခအြောငျရမညျ
kyahla marma dice:
ဒေါကျတာ ဖာဖာက မွနျမာ စကားတောငျ ကောငျးကောငျး မပွောတတျဘူး ဟေ့ ဟီးဟီး
Basd Nasd dice:
thank you RFA
shwemintharlay 007 dice:
Ver Hill Bike Galaxy Trail World2/ Motorcycle Racing / Android Gameplay Video #4
Ver Como fazer optics compensation no Node Video (Android)